multi function ကိုမီးရှူးတိုင်, ဘက်စုံသုံးလက်နှိပ်ဓာတ်မီး-FS-1001 - တရုတ် Ksdoing Co. , Ltd မှ
multi function ကို Glow Orb
ဘက်စုံသုံး Glow ပီပီ
Mini ကိုငါးလက်ကိုင်အားပြန်သွင်းနိုင် Battery ကိုပန်ကာလှည့်
Mini ကိုလက်ကိုင်အားပြန်သွင်းနိုင် Battery ကိုပန်ကာ
Mini ကိုတင်းနစ်ရက်ကက်လက်ကိုင်အားပြန်သွင်းနိုင် Battery ကိုပန်ကာ
multi function ကိုမီးရှူးတိုင်, ဘက်စုံသုံးလက်နှိပ်ဓာတ်မီး-FS-1001
ဒီထုတ်ကုန်သင်သည်အစဉ်အတွေ့ဆုံရန်မည်သာလက်နှိပ်ဓာတ်မီးဖြစ်၏။ ဒါဟာသင်ကချစ်ရမည် !! ရိုးရာဓာတ်မီးများနှင့်လုံးဝသစ် & အထူးတစ်ခုခုအပေါငျးတို့သ functions တွေပေါင်းစပ်! 300 Lumen Spotlight ကို (High-strobing-အနိမ့်)6ကို LED လုပ်ငန်းခွင်အလင်း,6LED ကိုခရမ်းလွန် / က Black အလင်း
ဒီထုတ်ကုန်သင်သည်အစဉ်အတွေ့ဆုံရန်မည်သာလက်နှိပ်ဓာတ်မီးဖြစ်၏။ ဒါဟာသင်ကချစ်ရမည် !! ရိုးရာဓာတ်မီးများနှင့်လုံးဝသစ် & အထူးတစ်ခုခုအပေါငျးတို့သ functions တွေပေါင်းစပ်!
300 Lumen Spotlight ကို (High-strobing-အနိမ့်)
6 LED ကိုခရမ်းလွန် / က Black Light က
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင် Glow Stick
AAA ဘက်ထရီ Pack ကို
တုတ်တောက်အဆိုပါပြန်သုံးနိုင်သောအတူအယ်လ်အီးဒီဖုံးအုပ်ထားပါ။3စက္ကန့်များအတွက်အယ်လ်အီးဒီကိုဖွင့်မည်။ သင်ရုံအလင်းရောင်ကတော့ချောင်းကိုပညတ်တော်မူ၏။ အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့အလင်းမှာအလင်းရောင်ချောင်းကိုသုံးပါနှင့်သင့်ဘက်ထရီသိမ်းဆည်းပါ။
စာနယ်ဇင်းနှင့်အလင်းအိမ်မျက်တောင်ခတ်သည်အထိခလုတ်ကို "တွင်" ကိုင်ထားပါ။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ယခုစွမ်းအင်ချွေတာရေးသံသရာတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ အခုဆိုရင်သင့်ဘက်ထရီဖျန်မရှိဘဲအလင်းရောင်ချောင်းကို illumination ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
THE ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင် Glow ချောင်းကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
အဆိုပါပြန်သုံးနိုင်သောအလင်းရောင်ချောင်းကိုအတွင်းပိုင်းစထရွန်တီ aluminate ၏ဧရာမ crystals ဖြစ်ကြသည်။ ဤအတောက်ပ, အမြန်ဆုံး charging နှင့်အရှည်ဆုံးရဲအလင်းရောင်-in-the-မှောင်မိုက်စျေးကွက်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်မျက်နှာကျက်ပေါ်ပေမယ့် steroids အပေါ်ကပ်မှောင်မိုက်ကြယ်များအတွင်းရှိအလင်းရောင်နဲ့တူ၏စဉ်းစားပါ။
ဘယျအရာကျွန်ုပ်တို့၏ Glow-in-the-သည်မှောင်မိုက် SO Bright စေသည်?
ရိုးရာအလင်းရောင်-in-the-မှောင်မိုက်နေတဲ့အမှုန့်ထဲမှာလာကိုအားသွင်းဖို့အလင်းကိုစုပ်ယူကြောင်းသေးငယ်တဲ့ရေမြှုပ်သန်းပေါင်းများစွာအဖြစ်အမှုန့်ထင်ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့အပြည့်အဝကစွမ်းအင်ထဲကပြေးသည်အထိတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းအမှုန်တစ် low-level အလင်းရောင်ထုတ်လွှတ်ပေးပါပညတ်တော်မူ၏။ အဆိုပါအမှုန်သူတို့ကိုင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်အလင်း၏ပမာဏအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသေးစားကြောင့်မှောင်မိုက်၌ရိုးရာအလင်းရောင်ကြောင့်တောက်ပမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကြောင့်ဒီဖြစ်ပါသည်။ ဒီထုတ်ကုန်ရဲ့အလင်းရောင် crystals ကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာသွားရမည်အကြောင်း, သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အမှုန်အရွယ်အစားကသူတို့ကိုပိုပြီးအလင်းစုပ်ယူတော့ဘူးပိုမိုအလင်းထုတ်လွှတ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ crystals သင်၏မျက်စိတောက်ပအဖြစ်သူတို့ကိုရိပ်မိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကြီးတွေဖြစ်ကြပြီးကတည်းကဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာကြီးမားတဲ့အလင်းရေမြှုပ်နှင့်တူများမှာ!
မှောင်မိုက်၌ပုံမှန်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုဖွင့်သင့်ရဲ့ညဥ့်ရူပါရုံကိုဖကျြဆီးခွငျးသို့မဟုတျသငျ့တည်နေရာမလိုချင်တဲ့အာရုံကိုဆွဲ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအနက်ရောင်အလင်းအိမ်အပါအဝင်ဖွငျ့ဤလက်နှိပ်ဓာတ်မီးတစ်ဦးကိုယ်ပျောက် function ကိုပေးတျောမူနိုငျသညျ။ သင့်ရဲ့ညဥ့်ရူပါရုံကိုကယ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးသင့်ရဲ့ငါးဖမ်းခရီးစဉ်အပေါ်ငါး spook ချင်ကြပါဘူးအနက်ရောင်အလင်းအိမ်ကိုသုံးပါ။ သင်တို့သည်လည်းကင်းမြီးကောက်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစွန်းအထင်း, လုံခြုံရေးအမှတ်အသားများနှင့်ထို့ထက် ပို. တွေ့ရှိရန်ထုတ်ကုန်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ crystals အားသွင်းမည်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့အနီရောင်အလင်းကိုမသုံးခဲ့ပါဘူး။
ဘာကြောင့်လဲ TWO ဘက်ထရီရွေးချယ်စရာများ?
3 AAA ဘက်ထရီ (optional) နဲ့ 1 ကို USB အားပြန်သွင်းနိုင်လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ: ငါတို့သည်အသုံးပြုသူများကနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောဘက်ထရီကမ်းလှမ်းနေကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီအလက်နှိပ်ဓာတ်မီးအားလုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရအကြောင်းပါ။
detach အနီရောင်မှန်ဘီလူး filter?
အဆင်ပြေသင့်ရဲ့လက်နှိပ်ဓာတ်မီး၏အောက်ခြေပေါ်မှာတည်ရှိသောအနီရောင်မှန်ဘီလူး filter ကိုသုံးပါ။
ယခင်: ဘက်စုံသုံး Glow ပီပီ
နောက်တစ်ခု: Mini ကိုချိန်ညှိကလစ်-အပေါ် USB- FS-2003Ub
Torch တပ် ချ.
ပြောင်းလဲအလင်း & တာရှည်ခံ Torch
dual Chargebale ဖလက်ရှမီး
အရေးပေါ် Tool ကိုဖလက်ရှမီး
အရေးပေါ် Torch Light က
Flash ကို Led Torch
Flash Light က
လက်လက်ကိုင် Led ဖလက်ရှမီး
Handhheld Led ဖလက်ရှမီး
အမြင့် Brightness ကိုဖလက်ရှမီး
အမြင့်ပါဝါ Led Torch
ရေငုပ် Torch ဦးဆောင်ပြီး
Led ဖလက်ရှမီး Torch
Led Rechargeable ဖလက်ရှမီး
Led Torch ဖလက်ရှမီး
Led Torch Light ကဖလက်ရှမီး
သြဇာအရှိဆုံး Led ဖလက်ရှမီး Torch
Multi Function ကား Torch
Multi Function Flash ကို Led Torch
Multi Function Led ဖလက်ရှမီး
Multi Function Torch ဦးဆောင်ပြီး
multi Functional Led ဖလက်ရှမီး Torch
Multi ရည်ရွယ်ချက် Torch Light က
multi Tool ကိုဖလက်ရှမီး
multi Tool ကို Led Torch Light က
Multi Tools များ Torch
ဘက်စုံသုံးစခန်း Lantern ဖလက်ရှမီး
အိတ်ဆောင် Dynamo Rechargeable Torch
အိတ်ဆောင် Multi Function ဖလက်ရှမီး
အိတ်ဆောင် USB ဖလက်ရှမီး
အားပြန်သွင်းနိုင် Torch Light က
Rechargeable Multi ရည်ရွယ်ချက် Torch Light က
အားပြန်သွင်းနိုင် Torch Light က Led ဖလက်ရှမီး
Rechargeable Torch Light ကစျေး
Tools များ Flash ကို Led Torch
Torch Light က
Torch Light က Led ဖလက်ရှမီး
USB Rechargeable Torch Light က
ရေစိုခံ Led Torch Rechargeable
နေရပ်လိပ်စာ:5/ F ကို, သင် Shang Mei အဆောက်အအုံ, YanTian, ​​FengGang, DongGuan, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
E-mail ကို: stevenhu@ksdoing-cn.com
Skype ကို: stevenhu1977